शब्दकोश: February 2016
परिवर्तन कसलाई मन नपर्ला र ! यथास्थानमा जमेर, पछाडि गुडुल्किएर बस्न कसलाई पो मन लाग्ला ! तर, पहिलेकै अँध्यारो समयको परावर्तन जस्तो भइदिएपछि परिवर्तन भन्नु पनि सधैं राम्रो र सुखद मात्र हुन्न रैछ भन्ने थाहा हुन्छ ।
राजन्त्रलाई बिदा गरेर मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आएपछि धेरै कुरामा परिवर्तन देखियो । सारमा होइन, रुप पक्षमा । फिल्मको नाम त फेरियो, कलाकार पुरानै प्रजातिका । पहिले चर्चा गरिएको एउटा भिलेनको ठाउँमा दर्जनौं भिलेनले कब्जा जमाए । सबका सब विभिन्न गौंडामा देशको चीरहरण गर्ने दाउमा हात लम्काइरहेका ।
आम जनताको बुझाइ यही हो ।
Posted by Jotare Dhaiba at Thursday, February 18, 20160: Comments